२० बुदे कार्ययोजना सहित एनआरएनए अध्यक्षमा कुमार पन्तको उम्मेदवारी घोषणा – rastriyakhabar.com
२० बुदे कार्ययोजना सहित एनआरएनए अध्यक्षमा कुमार पन्तको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उपाध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
उनले काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
एनआरएनमा स्थापनाकालदेखि सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएका पन्त यूरोप संयोजक हुँदै आइसिसी महासचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
आगामी अक्टोवर १५ देखि १७ तारिखसम्म काठमाडौंमा एनआरएनएको नवौं विश्व सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने छ ।
उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उनले गैरआवासीय नेपालीका समस्या, चासो र सरोकारलाई उच्चस्तरबाट सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । स्वदेशको समृद्धि र लगानी विस्तारका लागि २० बुँदे कार्ययोजना पत्र समेत जारी गरेका छन् ।
उनले विदेशबाट ज्ञान, अनुभव र सीप भित्र्याउन आफ्नो संस्थागत प्रयास रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
२० बुदे कार्ययोजना यस्तो
स्वदेशको समृद्धि र लगानी
१. स्वदेशको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक र व्यक्तिगत लगानी भित्र्याउन सक्रिय रहनेछु । सानोदेखि ठूलो लगानीलाई अभियानमा समाहित गरी १. अर्बको सामूहिक लगानी कोषलाई मूर्तरुप दिनेछु । नेपाल सरकारकोसमेत लगानी रहने यस कोषले पूर्वाधार निर्माण लगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
३. विश्वभर छरिएका नेपालीमार्फत् नेपालका पर्यटकीय आकर्षण र गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्न विशेष योजना ल्याउनेछु । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै त्यसअनुकूल वातावरण तथा नीतिका निम्ति पहल गर्नेछु । सरकारले अघि सारेको नेपाल ‘भ्रमण वर्ष–२.२.’ को सफलताका लागि सिंगो गैरआवासीय नेपालीको शक्ति र सञ्जाल परिचालन गर्न जुट्नेछु ।
४. सामाजिक तथा परोपकारी कामलाई अगाडि बढाउन भिजन–२.२. ले कल्पना गरेको एनआरएनए फाउन्डेसन विस्तार गरी सोहीमार्फत् एनआरएनहरुलाई सहभागी गराउनेछु ।
नागरिकता र मतदानको अधिकार
१० संसारका कुनै पनि मुलुकमा रहेका हरेक गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध हुन न्यूनतम शुल्क वा निःशुल्क सदस्यता पञ्जीकरणका लागि पहल गर्नेछु । विश्वका जोकोही नेपालीले गर्वसाथ यो संस्था मेरो हो भनेर आबद्ध हुन चाहने गरी संरचना सञ्जाल र छवि निर्माणमा जुट्नेछु ।
१६. संघको समयसापेक्ष विकास गर्न ‘भिजन २.२.’ को प्रस्ताव कार्यान्वयनको पक्षमा दृढ रहँदै यसलाई सफल बनाउन विशेष सक्रिय रहनेछु । साथै, संघको आर्थिक र सैद्धान्तिक स्थायित्व कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनेछु ।
शनिबार, अशोज ४, २०७६ मा प्रकाशित